Iza amin'ireo firenena atahorana ny handeha amin'ny 2018? | Vaovao momba ny dia
Iza amin'ireo firenena atahorana ny handeha amin'ny 2018?
Maria | | firenena, Tsangatsangana
Rehefa mandeha dia tsy mampaninona anao ny mitandrina ary manangona izay rehetra mety ilainao mba hanana dia tsy hay hadinoina sy azo antoka. Zava-dehibe ny famonosana ireo zavatra ilaina, ary koa ny fanangonana fampahalalana marobe momba ny toerana halehantsika.
Ny fikambanana International SOS and Control Risks dia namoaka antontan-taratasy misy fampahalalana mahaliana ho an'ny mpandeha amin'ny taona 2018 momba ireo firenena mampidi-doza indrindra fivezivezena na amin'ny fomba fijerin'ny fahasalamana, ny toetry ny lalana na ny herisetra.
Ity fikambanana ity dia manasokajy ny firenena amin'ny loko arakaraka ny halaviran-doza mety hitranga. Amin'izany fomba izany, ny maitso dia midika hoe ambany dia ambany, mavo ny ambany, ny volomboasary dia maneho ambaratonga antonony, ny mena dia maneho risika be ary ny garnet dia midika faran'izay mafy. Iza amin'ireo no ao anaty sokajy iray na hafa?
Ireo firenena toa an'i Danemark, Norvezy na Suisse dia voatanisa ho azo antoka indrindra raha toa ka tandindomin-doza i Spain, Australia, France, United Kingdom na Chile. Mifanohitra amin'izany no izy fa miseho any Afghanistan izy ireo, Mali, Libya, Syria, Yemen na Somalia.
Mikasika ny olana mifandraika amin'ny fahasalamana, ny fanasokajiana ny loko dia ampiharina amin'ny fomba mitovy ihany fa ny volontany kosa dia miampy ho an'ireo firenena izay mampivelatra haingana ny risika miovaova. Russia, India, China or Brazil dia ao amin'ny sokajy farany. Ao anaty mena no ahitantsika an'i Haiti, Burkina Faso na Korea Avaratra raha toa kosa i Japon, Etazonia, Portugal, Irlandy, Uruguay, Canada na New Zealand izay tena azo antoka.
Ny antontan-taratasy farany avy amin'ny fikambanana International SOS and Control Risks ho an'ny taona 2018 dia miresaka momba ny fiarovana ny lalana. Ny ankamaroan'ny firenena eropeana dia manana asfalta azo antoka, na dia misy aza ny fitomboan'ny loza atiny atsinanana. Mifanohitra amin'izany kosa, i Azia sy i Afrika no manana ny lalana avo indrindra amin'ny toe-javatra ratsy indrindra satria manoratra lozam-pifamoivoizana maro be izy ireo. Ao anatin'ity vondrona ity no ahitantsika an'i Vietnam, Ivory Coast, Thailand na Angola.
1 Inona no ambaran'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny momba izany?
2 Firenena iza no manoro hevitra anao tsy handehanana any?
3 Soso-kevitra momba ny dia
Inona no voalaza ao ny minisiteran'ny raharaham-bahiny momba izany?
Amin'io lafiny io, ny Ministeran'ny raharaham-bahiny any Espana dia manavao ny tranonkalany am-pitandremana amin'ny fampahalalana izay alefan'ny masoivoho sy ny kaonsily matetika. Alohan'ny handehanana any amin'izay toerana rehetra dia tsara ny hahafantarana ireo tolo-kevitra omen'ity andrimpanjakana ity ho an'ny olom-pirenena.
Ny fahasimban'ny toe-draharaha fandriam-pahalemana eo amin'izao tontolo izao noho ny fandrahonana iraisam-pirenena ho an'ny mpampihorohoro, ny faharatsian'ny lalana na ny fahadiovan'ny firenena sasany dia nahatonga ny Ny minisiteran'ny raharaham-bahiny sy ny fiaraha-miasa dia mangataka amin'ny mpitsangatsangana mba hisorohana ny fepetra fisorohana, hisorohana ny toe-javatra mety hampidi-doza ary hisoratra anarana ao amin'ny Masoivoho na Consulate Général de la Espaniôla mba hametrahana azy ireo amin'ny vonjy maika.
Firenena iza no manoro hevitra anao tsy handehanana any?
Amin'ny ankapobeny, ny minisiteran'ny raharaham-bahiny dia manoro hevitra ny amin'ny tsy fandehanana any amin'ny firenena 21 eto amin'izao tontolo izao, indrindra any Afrika, Azia ary Oseania noho ny loza aterany: Afghanistan, Iraq, Iran, Lebanon, Pakistan, Korea Avaratra ary Syria any Asia; Libya, Egypt, Somalia, Chad, Nigeria, Liberia, Guinea Bissau, Mauritania, Niger, Burkina Faso, Mali, the Central Africa Republic and Burundi in Africa and Papua New Guinea in Oceania.
Soso-kevitra momba ny dia
Fiantohana ara-pitsaboana sy fitsangatsanganana: satria any amin'ny firenena maro, ny vidin'ny hopitaly dia zakan'ny marary ary mety ho lafo dia lafo tokoa, aroso amin'ny fiantohana ara-pitsaboana izay, raha sendra aretina na lozam-pifamoivoizana mandritra ny dia dia miantoka ny fandrakofana feno. Ny fiantohana fitsangantsanganana dia hanampy antsika koa raha misy halatra, fatiantoka sidina na valizy.
Hanaja ny lalàna sy ny fomba amam-panao eto an-toerana: ny fihetsika izay ara-dalàna eto amin'ny firenentsika dia mety tsy ho ara-dalàna ao amin'ny firenena alehantsika. Noho io antony io dia tsara ny manontany amin'ny antsipiriany momba ny toerana haleha. Ilaina ihany koa ny fikolokoloana akanjo satria ny akanjo sasany dia mety handratra ny fahatsapana fahatongavana ary hiteraka tsy fahatakarana tsy mahazo aina.. Indrindra fa ny fivavahana dia manamarika ny fomba fiainam-bahoaka.
Photocopies an'ny antontan-taratasy: Mba hisorohana ny fampitahorana raha sendra misy halatra na fatiantoka dia asaina manao photocopie maromaro amin'ny antontan-taratasy tany am-boalohany isika (pasipaoro, politikam-piantohana, fanamarinan'ny mpandeha, visa ary carte de crédit) ary mitazona ny kopia sy ny tany am-boalohany.
Fisoratana anarana ao amin'ny rejisitry ny mpitsangatsangana: Ny Registrien'ireo mpitsangatsangana ao amin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny dia mamela ny antontan-taratasin'ireo mpizahatany rehetra hosoratana ary ireo any amin'ny dianao, amin'izay, miaraka amin'ny fiantohana ny tsiambaratelo rehetra, dia azo tratrarina ianao raha sendra vonjy taitra.
Fantaro ny fiteny: Na dia marina aza fa miteny anglisy ianao dia afaka mivezivezy eran'izao tontolo izao, dia mendrika ny mianatra fiteny vaovao. Ny fananana fahalalana faran'izay kely indrindra amin'ny fiteny eo an-toerana dia fomba iray ifaneraserana ary azo antoka fa hankasitraka ny ezaka ny tompon-tany.
Mitondrà fomba fandoavam-bola ampy: Soso-kevitra ny hitondra vola ampy handoavana sy hiatrehana ireo trangan-javatra tsy ampoizina mandritra ny dia, na amin'ny vola, na ho an'ny mpandeha, na amin'ny carte de crédit.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Iza amin'ireo firenena atahorana ny handeha amin'ny 2018?
Inona no tokony ho fantatrao handehanana amin'ny safari any Afrika?
20 amin'ireo tsangambato be mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao I